Real Madrid ayaa la dhibtooneysa maqnaashiyaha Cristiano Ronaldo - Jubbaland TV
By admin October 23, 2018 156
Real Madrid ayaa la dhibtooneysa maqnaashiyaha Cristiano Ronaldo sida la dareensan yahay maadaama ay kaliya 1-gool dhaliyeen shantii kulan ee ugu dambeysay dhamaan tartamada oo dhan, balse Isco ayaa qaba in kooxdiisa aysan u baahneyn shaqsi aan dooneyn inuu la joogo.
Xiddiga heerka caalami ee wadanka Spain ayaa weerar dadban ku qaaday saaxiibkiisii hore, wuxuuna qof walba u sheegay ineysan kooxdiisa wax culeys ah ka heysan maqnaashahiisa, sidoo kale isagoo duraya CR7 wuxuu ka dhawaajiyay inuu tabay kaliya Dani Carvajal iyo Gareth Bale.
Isco Alcaron wuxuu aaminsan yahay in kooxdiisa ay leedahay tayo ay kaga samatabaxdo dhibaato walba oo ay ku dhex jirto, Los Blancos ayaana caawa la ciyaareysa Victoria Plazen.
“Waan tabay Dani Carvajal iyo Gareth Bale” ayuu yiri Isco kadib markii wax laga weydiiyay maqnaashiyaha xiddiga reer Portugal.
“Ma rabno inaan raadino xal kooxda ka madax banaan”
“Kooxdeena waxaan ku heysanaa ciyaartoy tayo badan, sidaas darteed uma oyneyno qof aan dooneyn inuu halkaan joogo”
Dhanka kale Ronaldo wuxuu diiday inuu wax badan ka hadlo Real Madrid isagoo ku sugan garoonka Old Trafford, sidoo kalana wuxuu si fudud ugu jawaabay Isco.
“Ma ahan waqti ku haboon inaan ka hadlo wax ku saabsan Real Madrid, ima khuseyso hadda inaan ka hadlo” ayuu yiri Ronaldo.
“Ma ooyi kartid” ayuu yiri Ronaldo oo si fudud ugu jawaabay Isco.
Man City Oo Gaartay Goáankii Ugu Dambeyay Ay Ugu Dhaqaaqeyso Saxiixa Isco
Roma oo wayn doona xiddigo muhiim ah, ka hor kulanka galabta ay la qaadan doonto Kooxda,,,
Maamulka Gobolka Banadir Oo Casho Sharaf U Sameyay Xidigaha 17-Sano Jirada ee Xulka Qaranka+DAAWO SAWIRADA